Waxaa jiro labo qaab oo jaalalkeena uga faa'idi karaan qoraaladeena xayeysiinta iyo illaha | gt.io
Jaalalkeena uga faa'idi karaan qoraaladeena xayeysiinta iyo illaha
qoraaladeena xayeysiinta iyo illaha
/ Xayeysiinta Alaabaha
Waxaa jiro labo qaab oo jaalalkeena uga faa'idi karaan qoraaladeena xayeysiinta iyo illaha.
Marka koowaad, waxaan joogteynaa maktabada yar ee qoraalada, sida boorarka, loogooyinka iwm.
Kuwaan waxay diyaar u yihiin in laga dajisto koontadaada xulufada ee bogga xulufada gt.io.
Mida labaad, dooro jaalal ka faa'idi karo illaheena gudaha iyo awoodaha.
Tani waxaa loola jeedaa inaan abuuri karno alaabaha xayeysiinta shirkada sameyso sida boorarka iyo boggaga hore websaydka,
ama siiyo iyaga maqaalada gaarka ah, tusmada warbaahinta bulshada, iwm.
(Macaamiisha gaarka u ah ama gudaha maktabada)
Waxaa jiro sawir kali ah iyo/ama boorarka
sawirka iyo qoraalka ee aan ku haysano maktabadeena.
Boorarka macaamiisha gaarka u ah waxay noqon karaan
qaabka html ama boorarka fiidiyaha. Bandhiga Boorarka
waxay noqon karaan guud ama sumada la xiriirto,
ama la xiriirto sare u qaadid gaar ah.
Kuwaan waxaa ku jiro la qabsiyo kala duwan
ee gt.io loogada loo heli karo isticmaalka.
Waxaan leenahay maktabad qani ah ee Falanqeynada
Suuqa iyo Boorarka balooga suuqa la xiriirto
la soo dhigay qeybta Baloogeena websaydka, ee
waxaa si xor ah u isticmaali karo xulufooyinkeena.
Dooro xulufooyinka waxay leeyihiin iqtiyaarka lagu
codsanayo maqaalo gaar ah oo aan iyaga u qorno.
BOORARKA WARBAAHINTA BULSHADA
Qalab walboo hal abuur ah iyo qoraalada la dhigay
warbaahinteena bulshada waxaa isticmaali karo
jaalalkeena. Dooro xulufooyinka leh dooqa la
badelay, boorarka gaarka ah oo iyaga gaarka u ah.